Dota2Battle Pass ကို Level မြန်မြန်ဘယ်လိုတင်မလဲ | Wallet Codes Blog
Dota2Battle Pass ကို Level မြန်မြန်ဘယ်လိုတင်မလဲ
24 Jun, 2020 by Hlaing Lin Tun
Valve ကတော့ Dota Battle Pass ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Season အသစ်ကို item အသစ်တွေနဲ့ players တွေဆီကို ရောက်ရှိလာပါပြီ! ဒီနှစ်ရဲ့ Battle Pass က level မြန်မြန်တတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီး ပါရှိပါတယ်။ အသစ်ဖြစ်တဲ့ Cavern Crawl ကနေ တဖန်ပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့ Guild Quest တွေအထိ ကျွန်တော်တို့ Dota2Battle Pass ကို Level မြန်မြန်တင်ပြီး Rewards အလန်းတွေကို အေးဆေးရနိုင်အောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။
Battle Pass ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ Level တင်ခြင်း
Battle Pass ကိုဝယ်ပြီးရင် Level Progress Bar ကိုကြည့်ပါ။ Level ၁ခုချင်းဆီအတိုင်းမှာ ရနိုင်တဲ့ rewards တွေအကုန်လုံးကိုပြပေးထားပါတယ်။ Players တွေက Level ၁ခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ Battle Points တွေစုဆောင်းနိုင်ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ Level ရဲ့ rewards ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Level Bar တလျှောက်ကြည့်လိုက်ရင်လဲ အခြား Rewards တွေအများကြီးရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ Players တွေအတွက် မျှော်လင့်စရာတွေအများကြီးပါ။ ဥပမာ Level 2,000 အထိရောက်အောင်ဆော့နိုင်ရင် အပြင်မှာပါ Roshan ရုပ်တုရနိုင်မှာပါ။
Battle Pass ကိုမျှဝေခြင်း
Valve ရဲ့ Gift-a-Battle-Pass အစီအစဉ်ကြောင့်အခုဆို ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေကို Battle Pass gift လုပ်ပေးရင်လည်း Points တွေရနိုင်ပြီနော်! Dota က အခုလိုစေတနာရှိတဲ့သူတွေကို Special Titles တွေလည်းပေးတဲ့အတွက် ကိုယ့် Profile နဲ့ Versus Screen မှာ ကိုယ့် Gamer Tag နဲ့ ယှဉ်တွဲထားပြီးကြွားလို့ရနိုင်ပါပြီ။
Battle Pass ၁ ခု gift လုပ်ပေးရင် “The Selfless” ဆိုတဲ့ Title ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၃ ခု gift လုပ်နိုင်ရင် “The Benevolent” အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပါလိမ့်မယ်။ ၅ ခု gift လုပ်နိုင်တဲ့ စေတနာရှင်တွေကတော့ “The Wise” ဆိုတဲ့ title နဲ့ အများလေးစားခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။
Game Modes အသစ်တွေမှာဘယ်လို Level တင်မလဲ
ဒီနှစ်မှာတော့ Battle Pass မှာ Battle Points တွေရနိုင်တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ Solo ဖြစ်ပါစေ၊ Team နဲ့ဖြစ်ပါစေ Challenges တွေ၊ Quest တွေ၊ Guild Contracts တွေ အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ Level တင်လို့ရပါတယ်။
တစ်ခါမှာတော့ mini-game အသစ်ဖြစ်တဲ့ Carven Crawl ဆိုပြီးပါလာပါတယ်။ ဒီ mini-game ထဲမှာ Nightsilver နဲ့ Foulfell ဆိုပြီး Map ၂ ခုပါလာပါတယ်။ Battle Pass အစပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင် Nightsilver map မှာပဲဆော့လို့ရအုန်းမှာဖြစ်ပြီး carvens တွေထဲနက်နက်ရှိင်းရှိင်းသွားပြီးမှသာ Foulfell map ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Map ၁ ခုချင်းဆီမှာ Path ၃ ခုရှိပါတယ်။ ၁ ခု က utility heroes တွေအတွက်ဖြစ်ပြီး ၁ ခု က carries တွေအတွက် ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ၁ခု ကတော့ support တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Paths တွေပေါ်မှာရှေ့ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ Heroes တွေနဲ့ Quest တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ Special Tools တွေနဲ့ Exclusive Item Sets တွေကိုရှာဖွေရင်း Battle Points တွေရယူနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးထိရောက်သွားရင်တော့ Special Skins ၃ ခုကို ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အရည်အချင်းပေါ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ Players တွေအတွက်လည်း Wager System ရှိပါတယ်။ Cavern Quest ပဲဖြစ်စေ မည်သည့် Game Type မဆိုဖြစ်စေ ပွဲအစမှာ Tokens တွေကိုသုံးပြီး wager လုပ်လို့ရပါတယ်။ Wager လုပ်ထားတဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ရင် Battle Points တွေထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ June လ ၅ ရက်နေ့ Update မှာ Wagering Battle Point Rewards က 50% ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ ကြေငြာထားပါတယ်။
Cavern Crawl က stage တချို့က အရမ်းခက်နေပါသလား? အဲ့တာဆိုရင် အပြောင်:အလဲဖြစ်သွားအောင် Achievement တွေကို ရယူဖို့လုပ်ပါ။ “Achievements” tab အောက်မှာ Quest တွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Cavern Crawl က ဆော့ရမယ့် hero နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်ပေမယ့် achievements တွေက ပိုပြီးအောင်နိုင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီမှာ Quest Difficulty က ပြန်ပေးတဲ့ Battle Points အတိုင်းသွားတာဖြစ်ပြီး player အယောက် ၅၀၀ ကို high-five လေးပေးရတာကနေ Battle Pass Gifting အထိရှိပါတယ်။
ဒီနှစ် Battle Pass မှာပြန်ပါလာတဲ့ Feature ၁ခုကတော့ Guilds တွေပါ။ Dota2Reborn update မှာဖယ်ရှားလိုက် ကတည်းက Players တွေတောင်းဆိုလွန်းလို့ပြန်ပြီးထည့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုပြန်ပါလာပြီဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုက အရင်ထက်ကို ထိရောက်မှုရှိလာပါတယ်။
အခုဆိုရင် Guilds တွေကို create လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ join သည်ဖြစ်စေ ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကကြီးပါတယ်။
Daily Contracts – contract ၁ ခုကို daily objectives တွေလုပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။ Objective ၁ ခု အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင် Guild က Guild Points ရပြီး player က Battle Points ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ June လ ၅ ရက်နေ့ Update အရ Guild Contracts တွေ အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရင် ရနိုင်မယ့် Battle Points ကို 100% အထိတိုးပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
Guild Challenges – ၁ ပတ်ကို guild challenge ၄ ခု ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ၁ ခုကို အောင်မြင်ရင် နောက်၁ခု ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Guild အဖွဲ့သား ၃ယောက်နဲ့အထက်စုပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ရင်တော့ Guilds Points တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိပေးချက် – Guild တစ်ခုမှာပါဝင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ် Game Mode ကိုဆော့ဆော့ ဆော့တိုင်း Guild Points ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Guildmates တွေနဲ့အတူဆော့တဲ့အခါကျ Collective Rewards တွေဖြစ်တဲ့ Emoticons တွေ၊ Bonus Challenges တွေ၊ in-game Guild Banner upgrades တွေနဲ့ Battle Pass Bonuses တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို အများကိုပြသချင်ပါသလား? တကယ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ချင်စိတ်ပြင်းထားနေတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ့်စွမ်းရည်ကို အသစ်ဖြစ်တဲ့ Battle Gauntlet Mode ထဲမှာပြသနိုင်ပါတယ်။ Challenge ၁ ခု issue လုပ်ပြီဆိုရင် entry tickets တွေကို အသုံးပြုပြီး solo ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေနဲ့ဖြစ်စေ Gauntlet Queue ထဲကို ကိုယ့်နေရာဒေသအလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ join လို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်ဘာရမလဲ? ၂ ပွဲမရှုံးခင်မှာ ၃ ပွဲနိုင်ထားရင် 1,500 Battle Points နဲ့ Battle Tier Upgrade ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tier 1,2ဒါမှမဟုတ်3ကနေစနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် အကောင်းဆုံး player တွေကတော့ Tier 10 အထိတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့် Skills တွေကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Battle Pass ရဲ့ 25% က The International Prize Pool ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နှစ်စဉ် အစဉ်အလာအတိုင်း Battle Pass က The International (TI) ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး crowdfunding mechanic ဖြစ်ပြီး Battle Pass ကနေရရှိတဲ့ ရောင်းအား 25% က ဒီ E-Sports event ရဲ့ prize pool ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Battle Pass ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် အရင်နှစ်ရဲ့ TI ကို $34,330,068 အထိတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပြီး Champions တွေအတွက် ဆုကြေး $15,620,181 စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်တိုင်း Dota community က ခန့်မှန်းထားတာတွေကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အမြှင့်ဆုံး E-Sports Prize Pool ကိုရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်ရဲ့ Prize Pool ကအခုထဲက $1.6 million အထိရှိနေပြီဖြစ်ပြီး players တွေဝယ်ယူတိုင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးနေပါပြီ။ Battle Pass ထွက်ပြီးပြီးချင်း ၃ ရက်အကြာမှာပဲ $10 million နီးနီးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင် Dota community က မကြာခင် $40 million ရနိုင်ပါတယ်!
ဒါကတော့ Dota က players တွေကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ပျော်စရာကောင်းပြီး ဒီနှစ် Battle Pass ရဲ့ များစွာသော rewards တွေကိုရရှိနိုင်မယ့် level တင်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Solo ဆော့သည်ဖြစ်စေ၊ Team နဲ့ဆော့သည်ဖြစ်စေ၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးကစားရမှာသေချာသလို ကံကောင်းရင် အသစ်ထွက်တဲ့ Wraith King, Queen of Pain, Windranger တို့ရဲ့ Arcanas တွေနဲ့ Personas တွေဖြစ်တဲ့ Toy Plush Pudge နဲ့ Female Anti-Mage တို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Hlaing Lin Tun
More articles by Hlaing Lin Tun
No Way Out- A Dead Realm Tale Now on Steam
Available Now on Steam- No Way Out No Way Out: A Dead Realm Tale is out